Xaaska xildhibaan Sheekh Shaacir oo lagu dhaawacay degmada Luuq ee gobolka Gedo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xaaska xildhibaan Sheekh Shaacir oo lagu dhaawacay degmada Luuq ee gobolka Gedo
Waxaa habeenkii xalay xaafadda Jazeera oo ku taala degmada Luuq ee gobolka Gedo lagu dhaawacay xaaska xildhibaan Sheekh Shaacir Sheekh Maxamed. ka dib markii qarax loo adeegsaday bambada nooca gacanta laga tuuro lagu weeraray hoyga uu xildhibaanku ka degan yahay degmadaasi.
Xildhibaan Sheekh Shaacir Sheekh Maxamed oo xubin ka ah baarlamaanka federaaalka Soomaaliya, ayaa ka badbaaday qaraxaasi, balse waxaa ku dhaawacantay laba qof, oo middi ay tahay xaaskiisii.
Nin ka mid ah dadka deegaanka, ayaa warbaahinta Bulshoweyn u sheegay in kuwii qaraxa ku weeraray hoyga mudanaha baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan, ay durbaba ka carareen halkaasi.
Goobjoogaha, ayaa sidoo kale inoo sheegay inaanay jirin wax rasaas ihi oo raggaasi ay u furayn dhinaca hoyga xildhibaan Sheekh Shaacir, sidoo kalana ma jirto buu yiri rasaas iska caabin ah oo ay furtay ilaaladiisa.
Ciidanka ammaanka oo gaaray hoyga xildhibaan Sheekh Shaacir, ayaa waxaan jirin cid ay u soo qab qabteen qaraxaasi, waxayse mid caadi ah kusoo celiyeen xaaladda xaafadda Jazeera ee degmada Luuq.
Xildhibaanka, ayaa maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa degmadaasi Luuq, iyadoona la sheegay in booqasho uu kula jooggo qoyskiisa.
Si kastaba ha ahaatee, xarakada Al shabaab, ayaa bishaan Ramadaan u muuqda kuwo kordhiyay weerarada ka dhanka ah xasiloonida, isla-markaana ay ka wadaan gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.